Aston Villa 1-2 Liverpool: Mane Oo Reds Ku Soo Celiyay Rajadooda Horyaalka Premier League-ga
HomeWararka CiyaarahaAston Villa 1-2 Liverpool: Mane oo Reds ku soo celiyay Rajadooda Horyaalka Premier league-ga
Sadio Mane ayaa qeybtii danbe ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Liverpool oo 2-1 kaga badisay Aston Villa si ay cadaadiska ugu sii hayaan kooxda Manchester City ee tartanka horyaalka Premier League.
Liverpool ayaa kusoo laabatay jidka guusha kaddib barbarrihii niyad-jabka ahaa ee ay Sabtidii la gashay Tottenham oo ku qabatay Anfield, taas oo ka lumisay laba dhibcood oo fursad ugu noqon lahaa inay dhaafto Man City.
Laba gool oo ay kala dhaliyeen Jeol Matip iyo Sadio Mane ayaa saddexda dhibcood u go’aamiyey Liverpool, iyadoo ay Aston Villa waxba ku kordhin kari weyday gool uu waqti hore u dhaliyey Douglas Luiz.
Daqiiqaddii saddexaad ee bilowga ciyaarta ayay Aston Villa gool kaga naxsatay Liverpool, waxaana kubbad uu goolhaye Alisson soo tufay ku celiyey Douglas Luiz oo hoggaanka u dhiibay Aston Villa.
Hase yeeshee difaaca reer Cameroon ee Matip oo labadii ciyaarood ee ugu dambeeyey kaydka fadhiyey ayaa saxay qaladkii ay sameeyeen ay sameeyeen isaga iyo Virgil van Dijk, waxaana uu keenay goolka barbarraha ah.
Kubbad uu Van Dijk lugta bidix kusoo dhaafiyey goolhaye Emiliano Martinez ayuu Matip lugta geliyey, waxaanu ciyaarta ka dhigay 1-1 daqiiqaddii 6aad ee bilowga ciyaarta.
Xidiga Sadio Mane ayaana hogaanka u dhiigay kooxdiisa isagoo kubad madax ah dhaliyay daqiiqadii 65aad kadib karoos uu ka helay L. Diaz guud ahaan kulanka ayaa ku soo dhamaaday 1-2.
Liverpool waxay hadda yeelatay 86 dhibcood, waxaanay isku mid yihiin Manchester City oo farqiga goolasha kaga haysa hoggaanka, hase yeeshee waxay City habeen dambe la ciyaaraysaa Wolves, haddii ay guuleysatana waxay hoggaanka ku qaban doontaa saddex dhibcood oo nadiif ah, xilli laba ciyaarood oo kali ahi ka hadhsan yihiin dhamaadka xilli ciyaareedkan.